Debian 3 Installer Wechitatu Musarudzo Akaburitswa | Linux Vakapindwa muropa
Vagadziri veDebian vakaburitsa kuburitswa kwe wechitatu vhezheni mukwikwidzi weanosimudza inotevera inotevera vhezheni ye Debian 11, "Bullseye".
Parizvino nekuvhurwa kweiyi yechitatu vhezheni kuchine makumi maviri nemasere akakomba ekuvharira zvikanganiso yeshanduro (mwedzi wapfuura yaive gumi nemashanu, mwedzi miviri yakapfuura 155), maererano neshanduko dzakakosha mune iyi vhezheni nyowani yekumisikidza ichienzaniswa neyechipiri mukwikwidzi vhezheni yatinogona kuwana inotevera.
Iyo Linux kernel yakagadziridzwa kuita vhezheni 5.10.0-8, kuwedzera kune izvo zveiyo vhezheni arm64 mu pwm-rockchip module yakawedzerwa kune udeb fb-module uye fusb302, tcpm uye typec module zvakawedzerwa kune usb-module, nepo zve armhf mune mdio-aspeed module yakawedzerwa kune nic-module uye zvinoratidzwa zvakare kuti matambudziko nekuonekwa kwekubatana kwenetiweki mu.MX6 mabhodhi akagadziriswa.
Pane rimwe divi zvakanyorwa zviito zvakawedzerwa izvo zvinogona rubatsiro kana zvikakundikana panguva yekuchaja (semuenzaniso dema skrini) neruzivo rwekushandisa isenkram yakawedzerwawo kuti itore firmware isipo uye kugadzirisa nyaya dzinobva pane izvi.
Ngatitangei nedzimwe nhau nezve firmware rutsigiro (# 989863):
- Hatidi kusiya vashandisi murima kana iyo system yaiswa haina bhuti zvakanaka (semuenzaniso dema skrini, yakashatisa skrini). Tine akataura nezve mukana iwoyo mune yekumisikidza gwaro uye runyorwa rwe dzimwe mhinduro, iro danda rinogona kubatsira chero nzira.
- Isu tinonyorawo isenkram-based maitiro ayo anotendera vashandisi ku tsvaga uye gadziridza isipo firmware pane ako masystem, nenzira yekushandisa. Ehezve, iwe unofanirwa kuyera zvayakanakira nezvayakaipira zvekushandisa chishandiso icho sezvaungangoda kuisa mapakeji asiri emahara.
Izvo zvakare zvataurwa izvo zve isina-yemahara yekuisa mifananidzo, kusanganisira firmware mapakeji, zvakagadziriswa kuti zvione kana masisitimu akaiswa anoda imwe firmware (semuenzaniso, firmware ye AMD neIntel mifananidzo yemakadhi kana Intel makadhi ezwi). Hw-detect inowedzera rutsigiro rwekuisa yakawedzera firmware mapakeji kana iyo udev dhatabhesi zvinhu zvinosanganisira modality matemplate ane DEP-11 metadata.
Kune rimwe divi, zvakakoshawo kutaura kuti nharaunda yatanga bvunzo yakavhurika beta yeiyo inotevera vhezheni yeDebian 11, umo kunyangwe ivo vashoma vasina ruzivo vashandisi vanogona kutora chikamu, kuti vaite uye vagovane kuongororwa kweiyo Hardware mamiriro paDebian 11.
Yakazara otomatiki yakaitwa mushure mekunge hw-probe package yaiswa mune nyowani vhezheni yekuparadzira iyo iko kushanda kwemumwe neumwe madhizaini kunogona kuzvimiririra kwakatemwa kubva kumatanda. Uye zvakare, repository inovandudzwa zuva nezuva nerondedzero uye katarogu yekuyedzwa kwehurongwa hwehurongwa hwakarongeka.
Iyo yekuchengetera ichavandudzwa kudzamara kutarisirwa kuburitswa kweshanduro nyowani yeDebian 11, mushure meizvozvo inozove nzvimbo yekuunganidza manhamba ekushandisa mashandiro emakore maviri anotevera.
Kune avo vanofarira kugona kutora chikamu muchirongwa ichi, vanofanirwa kuziva kuti chirongwa ichi hachizotanga zvoga, saka vashandisi vanoda kubatsira nekuunganidzwa kweruzivo vanofanira kumhanyisa kunyorera nekuvhura terminal uye mairi ivo nyora unotevera kuraira:
Kana vari avo vanoda kuziva zvakawanda nezvechirongwa ichi kana nezve iko kuunganidzwa kweruzivo, vanogona kutarisa ruzivo Mune inotevera chinongedzo.
Chekupedzisira, isu tinofanirwa zvakare kuyeuka kuti mazuva mashoma apfuura hwaro hweDebian 11 package "Bullseye" yakaenda kuchikamu chakazara chando, icho chero kuchinjisa chero shanduko kune mapakeji chakavharwa uye kunoda mvumo kubva kuchikwata chinotarisira kudzidziswa. yeiyo kuvhurwa, iine iko kukanganisa kwakakomba, kunetsekana kunowanikwa ndiko kunogadziriswa.
Kana ari kuburitswa kweshanduro iyi nyowani, zvinonzi zvakarongerwa Nyamavhuvhu 14.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Debian 3 Installer Wechitatu Musarudzo Akaburitswa